Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Kenya oo dib ugu soo laabanaya Dalka
Muqdisho-Qaar kamid ah Soomaalida ku nooleyd xeryaha qaxootyiga ee dalka Kenya ayaa ku Soo Qulqulaya gudaha dalka, kadib markii ay u adkeysan waayeen dhibaatooyinka ka dhacaya gudaha dalka Kenya.
Saraakiisha waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadaha iyo shirkadaha Duulimaadyada ee ka howlaga gudaha garoonka Caalamiga ee Aadan cadde Airport ayaa faahfaahin ka bixiyay Tirada Maalin kasta dalka ku soo laabata,waxayna xuseen in Maalin walba garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ay soo caga dhigato ku dhawaad 5 diyaaradood oo intooda badan uu Duulimaadkoodu yahay Muqdisho Nairobi,kuwaasi oo ay saaranyihiin Rakaab Soomalia ah oo aad u tira badan.
General C/laahi Gaafow Maxamuud ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ee heysata waaxda socdaalka iyo jinsayadaha ay tahay dadka ka imaanayo kenya ee Somalida ah oo aan heysan Baasaboorka Somaliga ah, Taasina ay dhib ku tahay Amniga garoonka.
Jabriil Jaamac Nuur oo ah mas’uul ka tirsan shirkada Jubba Airways of u waramayay warbaahinta qaranka ayaa isna sheegay in ay kordheen tirada Duulimaadyada ka yimaada Nairoobi, isagoo sheegay in wax korar ah uusan ku imaan Qiimaha markii hore looga imaan jiray Kenya.
Dadka ku soo laabanaya dalka ayaa celcelis ahaan waxaa lagu qiyaasay Afar boqol oo qof maalin kasta kuwaaso oo u badan Haween iyo Caruur, oqaarkooda ay saameysay falalka amni darada ah ee ka dhacaya gudaha dalkaasi.
« Nigeria Oo Soomaaliya Usoo Diraysa Ciidamo Boolis Ah Oo Tiro Yar
Bangiga Kenya oo Lacago Fara Badan Lagala Baxay Iyo Soomaalida oo Ukala Guureysa Yugandha Iyo Muqdisho »